“Trace the Face” - Muhaajiriinta Yurubka ku sugan - Su'aalaha badanaa la isweydiiyo
Su'aalaha Badanaa la is WeydiiyoCurrently selected
Waa maxay Trace The Face?
Trace The Face waa sawir kaydiye khadka tooska ah(onlayn), oo leh sawirro kumanaan kun oo qoysas oo raadinaya qoyskoda. Waxay ka caawisaa soogalootiga iyo eheladooda ku waasoo ku waayey xiriirkii tahriibka ee ku sii jeeday Yurub ama gudaheeda sidii dib la iskugu xiri lahaa. Waxaa maamula Hay'adda Laanqeyrta Cas ee dalka iyo Ururka Bisha Cas iyo ICRC-da.
Xaaladdee ayaan u isticmaali karaa Trace The Face?
Trace The Face waa aalad khadka tooska ah(onlayn) oo leh sawirro dad raadinaya qaraabadooda maqan. Waxaad halkaan ka raadin kartaa xubin qoyskaaga ka mid ah haddii:
aad u haajirtay Yurub oo aad lumisay xiriirkii qoyskaaga ee wadankaagii hooyo ama wadan kale
Waxaad leedahay qof qaraabo ah oo kaa maqnaa intuu aaday Yurub ama marka ay imidaan Yurub.
Xaaladaha kale – tusaale ahaan luminta xiriirkii lala xiriiriyay dagaalka, aafooyinka dabiiciga ah ama haajirida meel ka baxsan Yurub – Dhaqdhaqaaqa Caalamiga ee Laanqayrta Cas iyo Bisha Cas ayaa wali ku caawin kara. Waa inaad la xiriirtaa ama aad tagtaa Xarunta kuugu dhow ee Bisha Cas ee Dalka ama Ururka Bisha Cas ama xafiiska ICRC.
Waxaan rabaa inaan sawirkayga ku daabaco Trace The Face. Sideen u sameyn karaa?
Ilaa hadda, Suuragal maahan inaad daabacdid sawirkaaga adiga. Waxa keliya oo aad ku samayn kartaa iyada oo loo marayo Laanqayrta Cas ee Dalka ama Ururka Bisha Cas ama shaqaalaha ICRC.
Haddii aadan joogin mid ka mid ah waddamadan, weli waan ku caawin karnaa. Waad ka diiwaangelin kartaa ehelkaaga kaa maqnaa waxaadna furi kartaa waxa loo yaqaan Codsiga Baafinta.
Macluumaadka lagala xiriirayo xafiiska kuugu dhow ee Bisha Cas ee dalka ama Ururka Bisha Cas ama xafiiska ICRC
Waxaad kali xareyn kartaa codsi ah inaad raadsato xubin qoyska ka mid ah.
Waxaan ka aqoonsaday ehelkeyga sawir. Maxaan sameeyaa?
Haddii aad ku aqoonsatay qaraabadaada sawirka kaydiyaha, riix isku xirka "Ma haysaa macluumaad?" Kaas oo ku habboon sawirka hoostiisa. Buuxi foomka macluumaadka. Hay'adda Laanqayrta Cas ee Dalka ama Ururka Bisha Cas ama shaqaalaha ICRC ayaa kula soo xiriiraya sida ugu dhaqsaha badan.
Macluumaadkayga, iyo sidoo kale macluumaadka qaraabadayda, ma la ilaalin doonaa?
Haa. Weybsaytka, kaliya sawirkaaga iyo Xiriirka Qoyska iyo ehelkaaga maqan ayaa la wadaagi doonaa. Magacaaga, ama goobtaada lama shaacin doono.
Dhammaan macluumaadka kale ee aad la wadaagtay si ay kaaga caawiyaan raadinta qaraabadaada – sida meesha aad hadda ku nooshahay ama faahfaahinta ku saabsan sida iyo goorta xiriirka uu kaa lumay – waa qarsoodi. Macluumaadka waxaa lala wadaagi doonaa oo keliya gudaha Guddiga Caalamiga ee Laanqayrta Cas iyo Dhaqdhaqaaqa Bisha Cas.
Inta lagu jiro wareysigaaga shaqaalaha, waxaa lagu siinayaa ikhtiyaar inaad la wadaagto qaar ka mid ah macluumaadkaaga qaraabadaada ururada kale si aad uga caawiso raadinta isaga / iyada.
Macluumaad dheeri ah waxaa ku siin doona Sarkaalka Dib-u-Soo Celinta Xiriirka Qoyska marka aad bilowdo hanaankan.
Wadamadee ayaan isticmaali karaa Trace The Face?
Waxaad ka gali kartaa sawir kaydiyaha meelkastoo dunida dhaxdeeda ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad sawirkaaga ku faafiso weybsaytka, waxaad kaliya ku sameyn kartaa adigoo adeegsanaya Laanqayrta Cas ee Dalka ama Ururka Bisha Cas ama shaqaalaha ICRC. Tan suurtagal kama'aha dhammaan waddamada oo dhan.
Sawirkayga waxaan ku daabacay Trace The Face. Sidee jawaab ku heli karaa?
Haddii qof aqoonsado sawirkaaga ama haddii ehelkaaga siyaabo kale lagu helo, Laanqayrta Cas ee Dalka ama Bisha Cas ama shaqaalaha ICRC ayaa kula soo xiriiri doono. Nasiib darro, tani waxay qaadan kartaa xoogaa waqti ah, marka waxaa muhiim ah inaad nala socodsiiso wixii isbeddel ah ee ku saabsan faahfaahinta xiriirkaaga (cinwaan, lambar taleefan) ama haddii aad heshay ehelkaagii kaa maqnaa.
Uma aan haajirin Yurub. Ma isticmaali karaa Trace The Face?
Haa. Buugga sawirrada ee Trace the Face waa la hubin karaa adduunka oo dhan. Adeegga ah inaad geliso sawirkaaga gaarka ah looma heli karo dalalka oo dhan in kastoo.
Hadeysan suurta gal aheyn inaad faafiso sawirkaaga, barnaamijka Dib-u-Soo Celinta Xiriirada Qoyska waxay wali kaa caawin karaan inaad raadiso qaraabadaada lumay. Fadlan la xiriir xafiiska kuugu dhow mesha aad ku nooshahay si aad u ogaato sida.
Waxaan u haajiray Yurub oo aan lumiyay xiriirkii qoyskeyga ee dibedda Yurub. Ma isticmaali karaa Trace The Face?
Haa, waad hubin kartaa sawirka kaydiyaha si aad u aragto haddii kuwa aad jeceshahay sidokale ku raadinayaan, meel kasta oo ay joogaan – dalkaaga hooyo ama waddan kale. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa xafiiska kuugu dhow ee Laanqeyrta Cas ee dalka ama Ururka Bisha Cas ama xafiiska ICRC si aad u bilowdo raadinta, oo haddii aad rabto, ku daabac sawirkaaga Trace the Face.
Waxaan lumiyay xiriirkii qaraabadayda kuwaa soo u haajirey Yurub. Miyay Trace The Face i caawin Karaa?
Haa, waad hubin kartaa sawirka kaydiyaha si aad u aragto dadka aad jeceshahay, kuwaa soo u haajiray Yurub, oo horey u daabaceen sawirkooda. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa xafiiska kuugu dhow ee Laanqayrta Cas ee dalka ama Ururka Bisha Cas ama xafiiska ICRC si aad u bilowdo raadinta, oo haddii aad rabto, ku daabac sawirkaaga Trace the Face.
Ma aanan ka helin qaraabadaydii iga maqnayd sawir-kaydiyaha. Maxaa samayn karaa?
Haddii ehelkaagu ka yar yahay 15 sano, ka heli maysid sawir kaydiyaha. Sawirradoodu kuma jiraan khadka tooska ah taasna waa in laga ilaaliyo waxyeelada imaan karta. Kaliya waxaad ka heli kartaa sawirrada carruurta ka yar 15 adigoo kaashanaya Laanqayrta Cas ee dalka/Ururka Bisha Cas ama shaqaalaha ICRC.
Haddii ehelkaagu ka weyn yahay 15 sano, waan ka xunahay inaadan helin. Waxaad isku dayi kartaa inaad mar kale ka fiiriso weybsaytka Trace the Face wakhti ka dib isla markaana hubi haddii aysan sawirkooda la soo dhejin. Waxaad sidoo kale tagi kartaa Xarunta kuugu dhow ee Bisha Cas ee dalka ama Ururka Bisha Cas ama xafiiska Guddiga Caalamiga ee Laanqayrta Cas (ICRC), waddanka aad ku nooshahay. Waxaa jira waax gaar ah xafiisyadan dhamaantood waxay u heellan yihiin inay dadka ka caawiyaan raadinta qaraabadooda maqan. Barnaamijka waxaa lagu magacaabaa Dib-u-Soo Celinta Xiriirada Qoyska.
Faa'iido maleh inad la xiriirto Laanqeyrta Cas ee wadanka ama Ururka Bisha Cas ama ICRC ee dalka aad u maleynaysid inuu ehelkaagi lumay joogo. Waxay kaa codsan doonaan inaad la xiriirto Laanqeyrta Cas ee wadanka ama Ururka Bisha Cas ama ICRC dalka aad joogtid.
Waxaan raadinayaa saaxiib. Ma isticmaali karaa Trace The Face?
Hadaad raadineysid saaxiib, kuma sawiiri kartid sawirkaaga Trace the Face ama ma ka furi kartaa raadinta Laanqeyrta Cas ee wadanka ama Ururka Bisha Cas ama ICRC. Si loo hubiyo in dhammaan dadka ay quseyso laga ilaaliyo waxyeelada, xubnaha qoyska kaliya ayaa sidaas sameyn kara. Waxaad wali gacan ka geysan kartaa raadinta saaxiibkaaga adigoo la xiriiraya qoyskooda oo weydiista inay la xiriiraan Hay'adda Laanqeyrta Cas ee wadanka ama Ururka Bisha Cas ama xafiiska ICRC meesha ay ku nool yihiin.
U HOGGAANSANAANTA ILAALINTA XOGTA IYO AMNIGA
Sideen ku hubin karaa in macluumaadkayga shaqsiyadeed, iyo sidoo kale tan qaraabadayda, la ilaalin doono?
Kaliya Dhaqdhaqaaqa Caalamiga ee Laanqayrta Cas iyo shaqaalaha Bisha Cas ayaa helli kara macluumaadkaaga iyo macluumaadka qaraabadaada iyo faahfaahinta shaqsiyeed. Markaad wareysi la yeelanayso shaqaalaha Dhaqdhaqaaqa Caalamiga ee Laanqayrta Cas iyo Bisha Cas, waxaa lagu weydiin doonaa haddii macluumaadka qaar lala wadaagi karo ururada kale. Macluumaadka shaqsiyeed iyo xogta waxaa lala wadaagi doonaa kaliya oggolaanshahaaga.
Hay'adda Laanqayrta Cas/Ururada Bisha Cas iyo ICRC Waxyaabaha ay siinayaan waa uun bini-aadamnimo.
Kuma arko wax sawirro carruurta ah weybsaytkan. Sabab?
Haddii ehelkaagii ka yaryahay shan iyo toban sano, sawirkooda kama heli doontid weybsaytka. Si looga ilaaliyo waxyeelada ka dhalan karta, sawirada caruurta ka yar 15 sano lama shaacinin – waxaa kaliya laga heli karaa Laanqayrta Cas ee wadanka ama Ururka Bisha Cas ama Ururka Caalamiga ee shaqaalaha Laanqeyrta Cas. Si aad u eegto sawir kaydiyaha carruurta, waa inaad tagtaa xafiiska kuugu dhow ee Laanqayrta Cas / Bisha Cas xafiiska Dib-u-Soo Celinta Xiriirka Qoyska.